MUQDISHO WAAN JECLAHAY HADANA MA JOOGI KARO..!
W/D: C/raxmaan Max�ed Aadan (Dirham)
Waa cabsi joogto ah waxa aan had iyo jeeraale wehelka u ahay, marka aan waddada marayo, waxaan isweydiiyaa goormee lagu dili doonaa?, ama shil qarax ah uu agtaada ka dhici doonaa, kuna galaafan doonaa? Ama rasaasta ciidanka ay ku haleeli doontaa, iyagoo ka jawaabaya weerar lagu soo qaaday?.
Su�aalahaasi oo dhami waa kuwa ka dhashay xaaladda dhabta ah ee hadda ka jirta magaala madaxda Muqdisho, siyaasadda gabi dhacleynta badan ayaa waxey ku soo biyo shubatay, haddii aad dhinac raacdo dhafoorka ayaa xabbad lagaaga dhufanayaa, waa dhinacna ha raacin, cidna haku lug yeelan, laakiin, aniga waan feejignaan badanahay, kooxna ku siyaasasd ma ihi, waxaan jeclahay kaliya waa kala dambeyn iyo nidaam, waxaanse ka baqayaa shaki aan run aheyn in uu i salfado.
Imisa ayaa ku nafweysay siyaasadda ay rumeeyeen, ama kooxda ay ku fikirka noqdeen? Imisaase u xiran? Anigu intaas waxaan ahay goobjooge aamusan!, waxaan dusha ka daawanayaa waxa dhacaya, balse cabsida ayaa iga saa�id caleysay, oo waan u sii gagsan la�ahay, iskaba daa inaan siyaasadda la socdee, hadda nafteyda ayaan u baqayaa.
Maalinba meel bay joogtaaye, maanta magaalada waxaa ku sugan dowladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya, oo u soo guurtay caasimadda, marka laga reebo Golaha Shacabka oo si KMG ah ugu soo shaqeeya magaalada Baydhabo.
Waxaa jira dhacdooyin joogto iska noqday, markii ay dhiiragelin ka heleen idaacado iyo wargeysyo buunbuuniya dhacdooyinka ay sameeyaan, kuwa kale ma aha waa kuwa ka soo horjeeda siyaasadda dowladda ay ku shaqeyso.
Dagaalkii ugu dambeeyey ee Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geeddi uu ku dhawaaqay iney dowladdu ku guuleysatay oo la soo afjaray, wuxuu dhalay gaari miidaamsan oo la qarxiyo, ogow waxaa inta badan ku dhinta rayid ila mid ah oo Muqdisho degan, weerar gurile ah oo laftiisa aaney sahlaneyn dhibtiisa, sidoo kale, miino la aaso iyo bambo gacanta laga tuuro, ayaa wax caadi ah ka noqday goobaha ay dadka ku badan yihiin ama ay ciidamada joogan, inkastoo ay yar yihiin, haddana waxaa ka badbadiya idaacadaha Muqdisho.
Waxaase wax walba beentaa yiri, Marshal Lowgii ay xubnaha Golaha Wakiilada u codeeyeen in dalka la geliyo ayaa wuxuu dhaqan galay muddo yar un ka hor, wuxuuna u soconayaa si xawli ah.
Nolosha habeenkii ee magaalada Muqdisho waxey la mid tahay meel eber ah, hadda waa bandow, wixii ka horreeyeyna weeraro gaadmo ah ayaa qaati laga taagnaa, waxaaba sii dheer isbaaro aad mooddo in dadka loo garba duubay, waa habeenkii qolkaaga jiifka haka soo bixin.
Kaba sii daran hawlgalada ay sameeyaan ciidamada dowladda ayaa dorraad iyo shalay waxey qalqal geliyeen noloshii caadiga aheyd, waxaan ku sigtay inaan iyadoo maalin ah habeen u maleeyo.
Ciidamada dowladda oo Boolis iyo Milateri isugu jira ayaa waxey shacabka ula dhaqmeen maalmihii yaraa ee laga soo gudbay, si aan caadi aheyn, waxey geliyeen xaalad argagax oo fool xun, waxey dhaceen hantidii rayidka, waxeyna taagan yihiin maalin iyo habeen dariiqyada muhiimka ah ee magaalada.
Intaasi oo dhan haddii aan ugu dul qaadan lahaa, waxaan sinaba u fiirsan Karin, in askari Itoobiyaan ah uu wadada iga celinayo oo uu I dhahayo �Hit� iyo �Yalam�, waa wax aanan qaadan karin, waa ciil ku noolow, adoon waxba ka qaban Karin, waxaan ka badin waayey inaan guri jooge iska noqdo anoo ciil sariirteyda la dul saran.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaa ku duugan xudunteyda, waa meeshii aan ku dhashay, ee aan ku barbaaray, nolosheyda waxey la falgashay cimilada iyo jawiga magaalada.
Waxaan ku dhex leeyahay saaxiibo badan, waligey kuma fikirin inaan meel uga baxo, mana aaminsani iney jirto meel ka nolol iyo hawo fiican.
Laakiin, dhalinyarada ila midka ah waxey ku taamaan iney tagaan meel ka baxsan Muqdisho, oo ay aadaan magaalooyin ay door bideen oo ku yaalla dalalka Yurub iyo Mareykanka, taasoo ay ku macneeyaan iney u doonanayaan horumar iyo waxbarasho, aniguse waan ka duwanaa waligey waxaana maanka ku hayaa inaan Muqdisho wax ku ahay, waxaan ku riyoodaa iney xaaladdu isbadali doonto maalin un, nafteydana sidaas ayaan ku sabaa.
Maalmo kala duwan waan u soo joogay iyo xaaladdu kala jaad ah, waxaan ka mid ahaa dadka degan Muqdisho oo ay gacanta ku dhigaan marba koox, balse, markan waxey nafteydu igu leedahay, meesha naga dhaqaaji, iskuma aamini karnee!, Muqdisho waan jeclahay, hase yeeshee, ma sii joogi karo, meel aan ka aadana ma aqaan, waxaan un isaga sugayaa qadarta Alle oo aanan ka dhuuma karin!